Jery taratra… herinandro: mila vokatra haingana sy mivaingana | NewsMada
Nahabe adihevitra ny hoe: solombavambahoaka eo anivon’ny Antenimierampirenena ihany sa avy any ivelany ny ho lehiben’ny mpanohitra? Lany tsy nisy nitsipaka ny tolo-dalàna momba ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana. Tsy nandray anjara tamin’ny fandaniana izany ny vondrona parlemantera Tim.
Nanazava ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) teny anivon’ny Antenimierandoholona ny praiminisitra. Nitaraina ireo loholona ny amin’ny fampihenana ny tetibola ho an’ny Antenimierandoholona? Namaly ny praiminisitra fa tratran’izay fampihenana izay avokoa ny andrimpanjakana sy ny minisitera.
Nanomboka ny asany ny eo anivon’ny fitsarana misahana ny kolikoly (Pac). 70 mahery ireo raharaha hovitaina amin’ity taona ity, hisy andiany valo. Ao anatin’izany ny fanaovana kolikoly, ny fanodinkodinam-bolam-panjakana, ny famotsiam-bola, ny fanamparam-pahefana, ny fisandohana andraikitra…
Nanao fivoriana atrikasa ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Polisim-pirenena, nijery ny ho paikady hamerenana ny fandriampahalemana ao anatin’ny enim-bolana manaraka. Nambaran’ny praiminisitra fa na mahay ny asany ny tomponandraiki-panjakana, na miray tsikombakomba amin’ny ratsy.
Fanapahan’ny HCC ny hanohizan’ny ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna ny asany aorian’ny fahataperan’ny fe-potoam-piasany, mandra-pahavoafidy izay handimby azy ireo. Tsy afa-mandimby toerana ny ben’ny Tanàna ny lefiny. Mametra-pialana izay mbola ho kandidà ka eken’ny Ceni ny firotsahany.
Nisy ny hafatra nampitain’ny filohan’ny Repoblika ho an’ireo minisitra tamin’ny filankevitry ny minisitra. Anisan’ny voalazany tamin’izany ny hafainganina sy hatsaraina ary hampivaingana anatin’ny fotoana fohy ireo tetika sy lamina mba hipaka mivantana any amin’ny fiainam-bahoaka.
Matoa nisy izay hafatra farany izay, tsy mbola tafapaka any amin’ny vahoaka ny asan’ny fitondrana? Mila vokatra haingana sy mivaingana…